Madaxwaynaha DDSI Ayaa Maanta Golaha Capinetka Layeeshay Shir Lagaga Wada Hadlayay Mashaariicaha Dhamaaday Iyo Ka Faa'idaysigooda. - Cakaara News
Madaxwaynaha DDSI Ayaa Maanta Golaha Capinetka Layeeshay Shir Lagaga Wada Hadlayay Mashaariicaha Dhamaaday Iyo Ka Faa'idaysigooda.
Jigjiga(CN) Talaado.Dec.02.2014, Madaxwayanaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa saaka golaha Capinetka kulayeeshay shir lagaga wada hadlayay mashaariicaha deegaanka oo kadhacay hoolka shirarka ee xafiiska madaxwaynaha.
Shirka ayaa ugu horayntii waxaa furay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, waxaana la isla qaatay in laga wada hadlo ajendayaal dhowr ah oo ay ugu muhiimsanayd mashaariicaha sanadkan ee ladhamaystiray iyo sidii looga faaidaysan lahaa iyo heerka ay marayaan mashaariicaha kale ee socda.
Wasaaradaha iyo shirkadaha dawliga ah ee gacanta kuhaya mashaariicaha ayaa laga wada hadlay qorshe ahaan qaabka ay mashaariicaha u wadaan iyo kuwa haatan gabagabada ah. Waxayna qaar kamida shirkadaha dawliga ahi soo bandhigeen mashaariicaha ay dhamaystireen iyo kuwa haatan maraya gabagabadii.
Wakaalada Dhismaha Hawlaha Biyaha ee DDSI ayaa soo bandhigtay warbixinta mashaariicda ladhamaystiray iyo kuwa gabagabada maraya, Maareeyaha wakaalada dhismaha hawlaha biyaha ee DDSI mudane Maxamed C/waaxid ayaa fahfaahin dheeri ah kabixiyay suaalihii kadhanka ahaa golaha capinetka iyo qorshihii xukuumadeed ee wakaalada loo idmay. Wuxuuna maareeyuhu soo jeediyay mashaariicdii biyo-galinta iyo horumarinta dhul-daaqsimeedka ee gobolada Sitti, Nogob, Faafan iyo Shabeele.
Sidoo kale waxaa shirkan lagaga hadlay shaqooyinkii mashaariicaha ee Wakaalada Naqshadaynta, Daraasaadka iyo Dabagalka Mashaariicaha ee DDSI, waxaana halkaasi si qoto dheer uga warbixiyay maareeyaha wakaalada Eng. Subeer Cabdi oo faahfaahin kabixiyay mashaariic badan oo ay wakaaladu iskalahayd daraasaadkeeda iyo naqshadaynteeda, kuwaas oo ay kamid ahaayeen mashruuca biyo galinta iyo horumarinta dhul-daaqsimeedka ee Fiiq-Xamaro-Gasaangas. Maareeyuhu waxaa kale oo uu sharaaxad kabixiyay naqshada mashaariicda cusub oo ay kamid yihiin mashruuca Qaaxo-Q/bayax-H/sheekha-Araarso-Magaalo cad- Dh/buur iyo mashruuca Birqod-Marsin-Gaashaamo-Danood-Farmadow.
Mashaariico badan ayay aad uga hadleen golaha capinet-ku, waxaana aad loo soodhaweeyay mashaaricda sida fiican loo ebyay iyadoo sidoo kalena laga faalooday caqabadihii iyo dhibaatooyinkii laga bartay mashaariicda ladhamaystiray islamarkaana lasheegay in kuwa hada socda ay si fudud oo dhakso ah ku dhamaanayaan.
Kadib markii aad looga wada hadlay mashaariicaha dhamaaday iyo heerarka ay kala marayaan ayuu madaxwaynuhu sheegay in bulshada si dhakhso ah looga faa'iideeyo mashaariicaha dhamaaday oo ay kamid ahaayeen mashruuca Harawo oo ladhamaystiray 200 oo hektaar oo kamida mashaariicda dib u dajinta ee gobolka Sitti iyo mashaariico kale oo haatan gabagabadii la duljoogo.
Madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar waxuu kahadlay xoojinta dabagalka mashaariicaha isagoo carabka ku dhuftay in la dardar galiyo mashaariicaha socda. Waxaana shirkaduhu sheegeen in dhamaan mashaariicaha badankood ee gabagabada ah lagu dhamaystiri doono muddo bil ah ama wax kayar.
Wakaalada dhismaha hawlaha biyaha iyo wakaalada naqshadaynta iyo daraasaadka ee DDSI oo ah wakaalado door laxaad leh kaqaatay isbadalka horumar ee deegaanka ayaa iyaguna shirkan maanat ka dhaxlay talooyin badan oo ka anfici doona hawlahooda shaqo.
Madaxwayanaha iyo golahiisa capinetka ayaa ugu danbayntii isla qaatay go'aamo wax ku'ool ah oo ku aadan mashaariicda deegaanka iyo kafaaidaysigooda kuwaas oo ay kamida ahaayeen in loo xilsaaro guddi kashaqaysa sidii ay bulshadu uga faaidaysan lahaayeen mashaariicda la dhamaystiray iyo ilaalintooda.
Bilowgii sanadkan tirsiga taariikhada dalka ee 2007-da ayay xukuumada DDSI go'aansatay in mashaariicda ladadajiyo oo lagu dhamaystiro rubucyada hore ee sanadka oo haatan wali lagu jiro. Dadaalka iyo horumarka sida xawliga ah uga socda DDSI ayaa waxaa kaalin wayn ka ah go'aanada dardar galinta iyo dabagalka hawlaha horumarka ee ay hogaaminta xukuumadu had iyo jeer kujirto.